Waxaad rabto inaad wax ka ogaato raaxada galmada gaar ahaan galmada raga ay jecel yihiin, Waxaad isweydiisay maxay jecel yihiin raga ka hor galmada?
Jawaabta waa mid fudud: Raga waxa ay rabaan galmada ka hor galmo nuucaan waana galmo ay raga jecelyihiin.
Galmada raga iyo waxa ay jecelyihiin
Raga markeey rabaan in ay la raaxeystaan xaasaskooda waxay ay jecel yihiin waxyaabo badan oo ku saabsan galmada.
Waxay xaasaskooda ka rajeeyaan in ay u sameeyaan galmo holac ah. Raga ma jeclo oo kaliya in lala galmdoodo oo sariirta lala aado ee waxa ay sidoo kale jecel yihiin in si macaan oo uusan iloobi karin loogu raaxeeyo.
Inta aadan isweydiin galmada raga ay jecelyihiin waxaa fiican inaad isweydiiso, muxuu jecelyahay ninkeyga, muxuuse necebyahay? Shaki kaagama jiro in ninkaaga uu jecelyahay galmo laakin galmo nuucee ah? Waad la raaxeysataa ninkaaga laakin ma taqaanid waxa uu ka helo.
Markaad raaxo la sameyneyso ninkaaga waxa uu u biyo baxaa si dhaqsi ah adigoonan gaarin macaanka galmada gaar ahaan gariirka. Markuu biyo baxo kadib waxa ka timaado hurdo laakin adiga ma hurdi kartid.
Waxaad ubaahantahay weli galmo, ninkaagana ma dhihi kartid, aniga welii ma raaxeysan mana dareemin wax raaxo galmo ah.
Waan dareemi karaa inaad tahay xaas xishood badan oo aanan ninkeeda u sheegan karin rabitaanka galmada iyo sida ay wax u rabto. Waana dareemi karaa inaadan mararka qaar aadan ku qanacsaneyn sida ay wac u dhacaan. Tani waxay ku dhacdaa xaasas badan oo Somali ah mana tihid qofka ugu horeeyo ee aan ka caawino arimo nuucaan.
Dumarka qaar waa kuwo dareenkoodu saaid yahay oo jecel in aad loogu galmood laakin ma heystaan niman galmada jecel. Shit. Maxaa rag buuxaa oo galmada aad u jecel laakin aanan helin xaas dareen badan. Dhibkani dumarka kaliya ma heysto ee sidoo kale wuxuu heystaa raga.
Waxaa jiro xaasas badan oo sariirta caajis ku ah, xiiseynin galmada kaaga daran markuu ninkeeda u baahdo aanan qancineynin. Naag nuucaas intee ku hureysaa in ninkeeda la guursado naag kale? Jawaabta waaba iska cadahahay.
Galmada raga qaar
Raga Qaar ma yaqaanaan galmada macaan ee ay dumarka jecel yihiin. Ma yaqaanaan sida loogu raaxeeyo dumarka marka laga reebo inuu shumiyo kadibna geedkiisa baahasha la aado. Shan daqiiqo kadib wuu biyo baxay. Xaaskiisii waxaa ka soo harayo Indho. Waxay weydiineysa „Biyaha miya kaa yimid?“ Iyadoo rabto ineey xaqiijiso.
Muxuu ku jawaabayaa ninka?
Haa, haa, asigoo xitaa neefta dhibeyso, kadibna wuxuu ka dalbanayaa caano ama biyo in ay u keento. Raga nuucaas ah waa kuwo aanan wax ka fahansaneyn galmada ay dumarka jecel yihiin iyo sida loo qanciyo.
Talo ku socoto dumarka ka hor galmada raga
Dumarow waxaa fiican inaad ogaataan sababaha keenayo in nimankiina ay dhaqsi u biyo baxaan oo ay horay ka daalaan. Markaad taas ogataan ayaad raga ka heli kartaan galmo aad u macaan.
Laakin markii nimankiina aysan cunin cuntooyin nafaqo leh sida cuntooyinka xoojiyo galmada, iska ilaawa inaad ka heshaan galmada aad rabtaan. Nin subaxdii canjeero iyo saliid ku quraacdo, habeenkiina digir ama cambuulo ku casheeyo, nin nuucaas ah awood fara badan ma lahaan karaa oo uu idin kugu raaxeeyo? Jawaabta macquulka: Maya.
Qish: Halkani waxaan ku diyaarinay waxyaabaha raga ay ku nici karaan xaasaskooda, hadiid aad xiiseyneyso inaad akhrisato halkaan guji: Ninkaaga wuxuu kugu nici karaa 6 daan waxyaabood
Waa maxay galmada raga ay jecelyihiin ka hor int ay bilaaban